Akụkọ - Otu esi ehicha ma debe igbe ihe eji agba tii nke ọma
Etu esi ehicha ma debe igbe nkpu tea ahu nke oma
Ndị mmadụ na-ekwukarị: “Ihe asaa imeghe ụzọ, nkụ, osikapa, mmanụ, nnu, ihendori na tii mmanya.” Nke a na-egosi na tii abanyela n'akụkụ niile nke ndụ. Ya mere, ndị China hụrụ n'anya na-a drinkụ tii, yabụ na ị maara ihe niile banyere ndozi igbe igbe tii?
1. Gbalịa izere kọntaktị na mmanụ stains na tii tin igbe. Ọ bụrụ n’amaghị ama nweta unyi nke siri ike iwepụ, egbula ya n’ihe siri ike. Can nwere ike itinye ntụ sịga na unyi wee jiri akwa owu hichaa ya iji wepụ ntụpọ. Mpempe mpaghara Ọ nwere ike ihichapụ ya na akwa akwa dị ọcha tinye na polishing mado.
2. Enwere ike iji mmiri na-ekpo ọkụ kpochaa igbe tii tii na ihu matte; mgbe tii tin igbe na-eji ire ụtọ elu nwere ike ihichapụ na elu-edu ọlaọcha saa mmiri iji nọgide na-enwe a na-adịgide adịgide na-enwu gbaa luster.
3. Etinyela nri ma ọ bụ ihe ọ drinkụ drinkụ n’ime igbe tii tii n’abalị iji zere imebi elu ala. Mgbe ihichachara tii tin igbe, gbaa mbọ sachaa ya nke ọma ma kpoo ya n'oge, n'ihi na ndị na-ehichapụ mmiri na ụmụ irighiri mmiri ga-emebi elu nke igbe tii.
4. Zere ịkpọtụrụ igbe tii tii na ọkụ ma ọ bụ tinye ya na mpaghara ọkụ. Mgbe igbe ihe ọ isụ teaụ tii na-ekpo ọkụ karịa 160 degrees Celsius, ụdị ya ga-emebi ma arịa ndị ahụ ga - apụ ntụ ma ọ bụ nri. Yabụ, onye na-emepụta igbe ihe ọ theụ teaụ tii na-atụ aro ka ị na-emeso tii ahụ heat ekpokwala ọkpọ igwe igwe n'elu 160 Celsius iji zere mmebi.
N'ezie, ọ naghị esiri ike ihicha ma debe igbe tii, ọ dịghịkwa mfe ịsị na ọ dị mfe. Ọ dabere na otu ị si ehicha ma debe igbe tii.
Mgbanaka Pull Nwere Ike Imeghe Claw, CD Nchekwa Case, Ahaziri Tin Box, Igbe Tin, Tin Box Nkwakọ, Nkata Nchekwa Metal na mkpuchi,